नबिल बैंकले किसानहरुलाई कृषि कर्जा प्रदान गर्ने - City Post Daily
नबिल बैंकले किसानहरुलाई कृषि कर्जा प्रदान गर्ने
August 3, 2021 अर्थतन्त्र
काठमाडौं, १९ साउन । किसानहरुलाई कृषि कर्जा प्रदान गर्न नबिल बैंकले डी.भी. एक्सिलस (प्जभतष् ब्उउ)सँग सहकार्य गरेको छ । उक्त सहकार्य पश्चात बैंकले खेती फार्म प्लेटफर्ममा दर्ता भएका किसानहरुको लागि कृषि साधन, रसायन, मेशीनरी तथा अन्य आवश्यकताहरुलाई खरीद गर्नको लागी सहज वित्तीय पहु‘च प्रदान गर्ने छ ।
यस रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत किसानहरुलाई गुणात्मक बीउ र मल सुनिश्चित गर्न तथा सहज वित्तीय पहु‘च प्रदान गर्न नबिल बैंक एक प्रमुख बैंकको रुपमा अगाडी बढेको बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, किसानहरूले डी.भी. एक्सिलसबाट प्राविधिक सहयोग र बजारको सुनिश्चितताबाट लाभ लिन सक्ने पनि बैंकले जनाएको छ ।
उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह र डी भी एक्सिलसका निर्देशक देवेश प्रधान बीच हस्ताक्षर भएको छ ।
सो अवसरमा बैंकका सीईओ शाहले नबिल बैंकले कृषि व्यवसायको दिगो विकासलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास गर्ने जुन नेपालको कुल ग्राहृश्थ उत्पादनको प्रमुख योगदानको क्षेत्र भएको बताए । यस सहकार्यद्वारा कृषकहरूको आवश्यकता अनुसार कृषि कर्जा प्रदान गरि उनीहरुको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरि देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुराउँदै समाजमा स्वस्थ्य र स्वच्छ तथा अर्गानिक उत्पादनको पहु‘च पुर्याउने अभियानमा साथ दिने बताए ।त्यस्तै, डी.भी.एक्सिलसका निर्देशक प्रधानले एक्सिलस सक्रिय रूपबाट आफ्नो खेती एपको माध्यमबाट नेपाली किसानहरुलाई सहज डिजिटल कर्जा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको बताए । यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य सरल डिजिटल प्रक्रियाको माध्यमबाट नेपालको किसानहरुलाई सहजै वित्तीय पहुँच प्रदान गर्नु रहेको बताए ।
यस साझेदारीस‘गै, नबिल बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कृषिमा लगानी विस्तारको भिन्न प्रयोग गरि कृषकहरुलाई उचित वित्तीय अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको सफल कृषि उत्पादक बन्ने बताएको छ ।